ကျော်ခ| November 14, 2012 | Hits:4,477
One Response	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website ရာဇာ November 14, 2012 - 7:41 pm	အော်….ကိုကြီးစိုး ရယ်….စာရင်းဇယား တွေ ငြိမ်အောင်များ စောင့်နေရတယ်လို့….ဖြစ်မှဖြစ်ရလေဗျာ…အဲဒီစာရင်းဇယား တွေငြိမ်အောင် ဘယ်အချိန်ထိ စောင့်ရမှာလဲ????…အဲ့ဒီ စာရင်းဇယားတွေ ငြိမ်အောင် ကိုကြီးစိုး တို့က ၁၀ နှစ်စောင့်လဲ ပြသနာ မရှိဘူးလေ..နေစရာ စားစရာတွေက အပြည့်နဲ့ကိုး….ဟိုမှာ တကယ်တန်း ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ သူတွေက တရက်မပြောနဲ့ တနာရီတောင် မစောင့်နိုင်ကြတော့ဘူး….စားစရာမရှိ..နေစရာမရှိ တဲ့ သူတွေရဲ့ ဘဝလေးကို ခေတ္တခဏ စိတ်ထဲ စဉ်းစားပြီး မှ ပြောပါဗျာ….ပေးချင်တဲ့သူရှိနေတာတောင် အချိန်ကို စောင့်ခိုင်းနေရယ်လို့ဗျာ…သူတို့အကူအညီ ပေးမယ်ဆိုတာ ဘာစာရင်းဇယား နဲ့မှ မဆိုင်ပါဘူးဗျာ…လောလောဆယ် ရထားတဲ့ လူဦးရေ ဘယ်လောက်ဆိုတာ လေးပေးလိုက်ရင် သူတို့လုပ်တတ်ပါတယ်….ပစ္စည်းလိုလို့ ထပ်မှာရင်လဲ ၂၄ နာရီ အတွင်း ရနိုင်ပါတယ်….အစားအစာ ဆိုလဲ အခြေခံကြ တဲ့ ဆန်ဆီဆား ကပြည်တွင်းမှာရပါတယ်…အဓိက ငွေပါဘဲ….ခက်တယ်…ကိုယ့်အတွက် ဆိုရင် တမိနစ်တောင် အစွန်းမခံနိုင် ကြပေမဲ့ အများအတွက်ဆိုရင် ဟိုလူ့ခွင့်ပြုချက်ယူရ..ဒီလူ့ခွင့်ပြုချက် ယူရနဲ့ အချိန်တွေ ဖြုန်းနေကြတယ်….လိုအပ်ရင် prompt action လေးများ လုပ်ကြပါအုံး….စကားမစပ်…..ရခိုင်အရေး အတွက် လူသားခြင်း စာနာလို့ အကူအညီတွေ ပေးချင်လှချည်ရဲ့ ဆိုတဲ့ OIC အသင်းရော ကူညီဘို့ ကမ်းလှမ်းသေးလား???????….ကြုံရင် မေးကြည့်လိုက်ပါအုံး…